आर्थिक कारोबारका लागि आज शुभदिन, कस्तो छ तपाईंको राशिफल « Etajakhabar
आर्थिक कारोबारका लागि आज शुभदिन, कस्तो छ तपाईंको राशिफल
सामाजिक सेवाबाट मानसम्मान मिल्नेछ । मेष राशिका जातकले आजको दिन गरेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । आजको दिन देवालयमा पुगेर गरिव र भोका व्यक्तिलाई केही खानेकुरा दिनु राम्रो हुनेछ ।
आजको दिन त्यति अनुकुल छैन । मनमा चिन्ता, असन्तुष्टि रहन सक्छ । लामो यात्राका लागि अवसर आउनसक्छ । धार्मिक क्षेत्रको यात्रा गर्ने अवसर छ भने अघि बढ्नु वेश हुनेछ । यात्रामा निस्कनुभन्दा पहिले तपाईंको नजिकै रहेको कुनै पनि देवीदेवताको दर्शन गरेर मात्र यात्राको सुरुवात गर्नुभयो भने फाइदाजनक हुनेछ ।
मिथुन राशिका जातकका लागि आजको दिन आफन्तजनबाट सहयोग मिल्नेछ । सोचअनुसार काम हुनेछ । मनमा चिन्ता र भय छ भने पनि हट्दै जानेछ । मित्र र आफन्तलाई दिनुभएको सहयोग राशी फिर्ता हुनसक्छ । परिवारका सदस्यबाट कामको प्रशंसा हुनेछ । यात्राको अवसर आएका आजको दिन विहान सूर्योदयको दर्शनपछि यात्रा गर्नुभयो भने फलदायी हुनेछ ।
आजको दिन धन लाभको योग बनेको छ । नयाँ वस्त्र खरिद गरेर परिवारका सदस्यलाई दिनुभएमा खुसी छाउने छ । नयाँ कार्ययोजना बनाउनुहोस सफलता मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा सुख र सहयोग प्राप्त हुनेछ । स्त्रीबाट प्राप्त हुने सहयोगले काममा सफलता मिल्नेछ । सामाजिक मानसम्मान समेत मिल्नेछ । नयाँ कार्ययोजना बनाउनुहोला । आज बिहान सूर्योदयको दर्शन गर्नुहोला ।
मनमा प्रसन्नता छाउने छ । धनलाभ र स्वास्थ्यले पनि साथ दिने भएकाले नयाँ कामको अवसर आउने छ । आजको दिन मौन रहनु नै वेश हुनेछ । एकाग्रताको आवश्यकता भएको हुनाले आफूले गरेको काममा दत्तचित्त भएर लाग्नु राम्रो हुनेछ । आजको दिन परिवारका सदस्यसँग वादविवाद नगर्नु होला । दाम्पत्य जीवनमा खुसियाली छाउने छ । चन्द्रमाको साथ रहेको छ ।
व्यापार व्यवसायको कामबाट लाभ हुनसक्छ । अध्ययन अध्यापनमा सफलता प्राप्त हुनेछ भने रचनात्मक र कलाकारितामा मन जानेछ । सन्तानबाट प्राप्त हुने सुखले मनमा खुसियाली छाउने छ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रका कार्य गरिहनु भएको सफलता मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा सुख र समृद्धि हुनेछ ।
तुला राशिका जातका लागि आजको दिन सोच अनुसार काम नहुँदा मनमा चिन्ता हुनसक्छ । सकेसम्म आजको दिन विवाद हुने काम नगर्नुहोला । विवाद गर्दा अनेक आरोप आउँछन् भने तपार्इंलाई हानी हुनसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । व्यापारव्यवसायबाट केही फाइदा हुने काम हुनेछ ।
व्यापार व्यवसायबाट फाइदा हुनेछ । छोटो यात्राले मनमा खुसी छाउने छ । शत्रुले समेत कार्यप्रशसा गर्ने छन् । समयले साथ दिएको छ, आजको दिन घर र व्यापारको नयाँ काम गर्दा पनि उत्तम हुनेछ । आजको कुनै शिवालय र देवालयको दर्शन गरेर मात्र काम शुरुवात गर्दा सोचअनुसार काम हुनेछ । कसैलाई पनि दूवाच्य वचन नबोल्नु होला ।
तपार्इंलाई साथ सहयोग दिने कुनै .मित्र र आफन्तलाई आजको दिन भेट गर्दा सकारात्मक उर्जा भरिने छ । मन्दिर वा घरका जेष्ठ सदस्यलाई केही उपहार दिनुभयो भने प्राप्त हुने आशीर्वादले उर्जा थपिने छ । परिवारजनबाट प्राप्त हुने सहयोगले नयाँ कामको थालनी गर्नका लागि उत्साह थपिने छ । आजको नयाँ वस्त्र खरिद गरेर परिवारका सदस्यलाई उपहार खरिद गर्दा खुसियाली छाउने छ ।
आजको दिन आफ्नो गच्छेअनुसार भोका, गरिवलाई केही खानेकुरा दान गर्नु उत्तम मानिछ । कन्यालाई केही नयाँ उपहार दिनुभयो भने मनमा प्रसन्नता छाउने छ । देवालय र शिवालयमा पुगेर दर्शन मात्र गर्नाले मनमा हर्ष छाउने छ । गौमाता र भोका जनावरलाई केही खाना दिनु भयो भने तपाईलाई फाइदा पुग्नेछ ।
स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने र यात्रा गर्नुभन्दा पहिले पूर्व तयारी गरेर मात्र यात्रा गरे बेश हुनेछ । आजको दिन अनावश्यक खर्च, समयको दुरुपयोग हुँदा मनमा आफूले गरेको गल्तीको महसुस हुनसक्छ । त्यसैले कुम्भ राशिका जातको लागि आजको दिन अनुकुल देखिदैन । नियमित कामबाहेक अन्य काममा सोच विचार गरेर अघि बढ्नु होला ।
व्यापारव्यवसायमा लागेका मीन राशिका जातकका लागि आजको दिन उत्तम छ । सन्तान र परिवारबाट सुख प्राप्त हुनेछ । आफन्त र मित्रमण्डलीको साथ सहयोग प्राप्त हुने भएकाले तपाईको मनमा उत्साह थपिने छ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि तपाईलाई आजको दिन सफलता मिल्नेछ । परिवारका जेष्ठ सदस्यलाई केही उपहार दिनु होला । चन्द्रमाको साथ रहेको छ । आजको दिन शुभ रहेको छ ।
तपाईको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुहोस् असार १६ गते बिहीबारको राशिफल
भोलि सार्वजनिक बिदा दिने सरकारका निर्णय
४ पुरुषसँग विबाह गरे लगत्तै डिर्भोस दिएर करोडौँ सम्पत्ति हत्याएकी भावनालाई पाँचौ पतिले दिएको निवेदनले जेल पुर्यायो
गायिका दिलमाया सुनारसँगै सुतेर राती १२ बजे भागेका सुर्य श्रेष्ठले देखाए आँफुले सल फालेको ठाउँ
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन : हेर्नुहोस् असार १३ गते सोमबारको राशिफल
साउदीमा रहेका नेपालीहरुको लागि आयो दुखद खबर, ६० दिनभित्र साउदी छोड्नु पर्ने
जुकरबर्गको सम्पत्ति आधा घट्यो, मस्कले अर्बौं डलर गुमाए
सेयरबजारमा आइरहेको लगातारको गिरावटले ठूलासाना लगानीकर्तालाई मात्रै होइन ठूला ठूला अर्बपतिलाई नै नोक्सानी पुर्‍याएको छ।
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असार २० गते सोमबार , तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४४ बि.स.२०७९ असार २० गते सोमबार इश्वी सन २०२२ जुलाई ४ तारीख
तपाईले आफ्ना बालबालिकालाई लगाउनु भयो त कोरोनाविरुद्धको खोप ?
काठमाडौं १९ असार । बालबालिकाका लागि कोरोना भाइरसविरुद्धको थप २३ लाख मात्रा फाइजर खोप काठमाडौं
बालबालिकाका लागि कोरोनाविरुद्धको थप २३ लाख फाइजर खोप काठमाडौं आइपुग्यो, तपाईले आफ्ना बालबालिकालाई लगाउनु भयो त ?
काठमाडौं १९ असार । बालबालिकाका लागि कोरोनाविरुद्धको थप २३ लाख मात्रा फाइजर खोप काठमाडौं आइपुगेको
तपाईको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुहोस् असार १९ गते आईतबारको राशिफल
तपाइको यो साता कति शुभः ? हेर्नुहोस् असार १९ गते देखी असार २५ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल